Safa ngamapharaphara | News24
Uluntu lwakoo W luthi lwanele ngumlo weerote kunye namapharaphara. Umfanekiso: Lindile mbontsi
Lugrogrisa ngoqhankqalazo uluntu lwakoo W, eSite B, ukuba ngaba izikhalazo zalo azisiwa so ngabase magunyeni.
NgeCawa, iqaqobana la bantu lwalo mmandla luthe lwazama ukuvala umzila wendlela iMew Way, ngomgqomo wenkunkuma eliwusola ngokuba ngunobangela weengxaki abajongene nazo.
Phakathi kokunye, abahlali batyhola iSixeko saseKapa ngoku ngazinanzi izikhalazo zabo, logama bethe gqolo ukuba ngamaxhoba olwaphulo mthetho kunye neempuku.
Ngokwengxelo, ubomi bujike bafana nencindi yekhala kubahlali bale ndawo ngenxa “yamapharaphara” kunye na magundwana aphuma kulo mgqomo. Kubikwa ukuba lo mgqomo ufanele ukufaka inkunkuma yabahlali bakoo TR, koko usuke wayindawo yezigebenga.
Abahlali abalugcwabevu ngumsindo batyhola ngelithi kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, kufunyenwe intwazana eqikelelwa kwi 15 leminyaka ivalelwe ngaphakathi. Oku kulandela uthotho lweziganeko zo lwaphulo-mthetho. Kutyholwa ngelithi oonqevu basebenzisa lo mgqomo ukugila yonke imikhuba, kuquka ubukoli.
Usihlalo wekomiti yabahlali, uSimphiwe Ngxande, uthe sele kulithuba befumana izikhalazo ngalo mgqomo, kwaye iinzame zabo zokunyanzelisa abase magunyeni ukuba benze into ngawo ziwe phantsi.
“Sizakuhlala apha phakathi evekini sijonge imeko. Ukuba abenzi nto sizakuphinda sivale umgaqo,” utshilo uNgxande.
Uceba wendawo, uLulekwa Jali uthe uzazi zonke iingxaki ezijamelene nabahlali, kodwa iinzame zakhe zokunceda zifa namthanyane. Uthe kudala ekhalaza kumaziko ohlukeneyo kamasipala, neCandelo lezeMpilo kunye nelijamelene no coceko.
“Okona kubuhlungu kukuba le meko ichaphazela kakhulu abantu abadala,” utshilo.